Iyo Inogara Iri pane basa reApple Watch Series 5 skrini inopa yakakwira bhatiri kushandiswa maererano nevazhinji vashandisi | Ndinobva mac
Iyo Inogara Iri pane inoshanda yeApple Watch Series 5 skrini inopa yakakwira bhatiri yekushandisa zvinoenderana nevazhinji vashandisi
Kuvandudzwa kwakamirirwa kwenguva refu kweApple Watch, kwakabva paruoko rweChitsauko 5, chishandiso chinotipa zvinyorwa zviviri zvikuru: zvinogara zviripo -kirati uye kambasi. Munguva yekuratidzwa, Apple yakavimbisa kuti bhatiri kunwa kweiri basa hakuzokanganisa bhatiri remuchina zvakanyanya, zvisinei, mishumo yekutanga inosimbisa zvinopesana.
Iyo Series 5 ndiyo yekutanga Apple Watch modhi neiri basa, basa raive ratovepo mune mamwe mahematari ane Android Wear uye ayo mashandisirwo apo iri basa rakaitwa rakasimuka zvakanyanya. Sezvavanotaura kubva kuCupertino, kuzvionera kweApple Watch Series 5 inosvika maawa gumi nesere, zvakafanana neiyo Series18.
Nekudaro, vashandisi vazhinji vari kutaura kuburikidza neTwitter kuti bhatiri mashandiro emhando nyowani nechiratidziri nguva dzese chiri kusiya zvakanyanya kudiwa, isingasvike inofungidzirwa maawa gumi nemasere anonzi neApple.
Kunyangwe zvese zviri zviviri Series 4 uye Series 5 zvichipa kuzvitonga kumwe chete, maawa gumi nemasere, modhi nyowani iri kure nekusvika pairi chero bedzi isu tine skrini nguva dzose, basa iro nerombo rakanaka rinogona kumiswa.
Kana Apple ikaona kuti kuzvitonga kunosvika maawa gumi nesere, zvingangoita kuti dambudziko rekushandisa zvakanyanya bhatiri reSystem 18 riri kukonzerwa nechinetso che software, saka inogona kuvandudzwa nekukurumidza nekuburitsa yekuvandudza, chero bedzi Apple inotora nhanho yekutanga uye ichibvuma iri dambudziko.
Isu tinofanirwa kuziva kuti kuzvitonga uko Apple kwaanotipa, sekureva kwepepa, kwemaawa gumi nesere, kwakareba sekunge isu tisingamboite zviitiko zvemitambo nazvo. Pakutanga kuyera chiitiko chemitambo, iyo Apple Watch inogadzira inoteedzana nema sensors kuongorora nguva dzese zvatiri kuita, izvo pakupedzisira inokanganisa hupenyu hwebhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Inogara Iri pane inoshanda yeApple Watch Series 5 skrini inopa yakakwira bhatiri yekushandisa zvinoenderana nevazhinji vashandisi
Ini ndinouya kubva munhevedzano 3 iyo yakagara kusvika kumazuva maviri pasina dambudziko.
NeChishanu Gunyana 20 ndakatenga akateedzana 5 uye ndinofanira kuichaja husiku hwoga hwoga, bhatiri rinobhururuka ...
Ini handikwanise kuzvienzanisa neakateedzana 4, asi mutsauko neakateedzana 3 andaive nawo ane hutsinye.
Pane mamwe mawebhusaiti ayo anotaura nezveApple ndaona kuti kune vazhinji vashandisi vanogunun'una kuti hupenyu hwebhatiri hweakateedzana 5 ishoma pane hwemutsara wechina ... Uye zvinonzi zvinogara zviri pamodi ...
Pane chero munhu akacherekedza bhatiri repasi mune akateedzana 5 achienzaniswa neakateedzana 3 kana 4? Zvinogoneka here kuti watchOS 6.1 inogadzirisa nyaya yebhatiri?
Zvekare tinogona kupa mari zvigadzirwa zveApple pasina mubereko
Safari 13 yatovepo uye zvinoita sekunge hainyatsoshanda zvakanyanya